Amagagasi entwasahlobo: ayini, lapho enzeka nezinhlobo ezahlukahlukene | Isimo Sezulu Senethiwekhi
IsiJalimane Portillo | | Kubuyekezwe ngomhla ka- 25/07/2018 11:02 | Ciencia
Amagagasi, leso simanga esenza olwandle kwesinye isikhathi lubanzi futhi ezinye izikhathi zibe zincane. Lokhu kungukuhamba kwesikhashana kwenqwaba yamanzi ngenxa yokuheha okwenziwa yinyanga nelanga eMhlabeni. Uma ukhuluma ngamaza, uzwa ngawo amagagasi aphilayo futhi ahamba kancane. Yini ngayinye ngayinye futhi ukuba khona kwayo kuncike kuphi?
Uma unesithakazelo kukho konke lokhu, lapha uzothola lonke ulwazi mayelana nokuthi ama-tides asebenza kanjani, yini ama-spring tide nokuthi yiziphi izinhlobo zawo. Ngabe ufuna ukuqhubeka ufunde? 🙂
1 Igagasi nemijikelezo yalo
2 Amagagasi aphilayo neap
3 Izinhlobo zamagagasi entwasahlobo
3.1 Amagagasi entwasahlobo
3.2 Amagagasi entwasahlobo alinganayo
3.3 Amagagasi entwasahlobo e-equinoctial perigee
4 Kungani engekho amagagasi oLwandle iMedithera?
5 ICabañuelas 2016-2017
Igagasi nemijikelezo yalo
Inyanga neLanga zenza isenzo samandla adonsela phansi eMhlabeni esenza lezi zinqwaba zamanzi zihambe ngokuhambahamba. Kwesinye isikhathi amandla adonsela phansi okuheha asebenza kanye ne-inertia eyenziwe ukunyakaza komhlaba nokuhamba kwegagasi kuyabonakala. Ngenxa yokusondela kwenyanga kwiplanethi yethu, isenzo esikukhiqizayo kumanzi amaningi sikhulu kunaleso seLanga.
Umhlaba uhamba uzungeza njalo emahoreni angama-24. Uma sima ngaphandle, besingabona ukuthi iplanethi yethu nenyanga zihambisana kanjani kanye ngosuku. Lokhu kungenza umuntu acabange ukuthi kunemijikelezo yamaza eyodwa njalo emahoreni angama-24. Noma kunjalo, akhiqizwa ngomjikelezo cishe wamahora ayi-12. Kungani lokhu kwenzeka?
Lapho inyanga isendaweni ebheke phezulu yolwandle, iheha amanzi bese evuka. Lokhu kungenxa yokuthi uMhlaba nenyanga kwakha uhlelo oluzungeza isikhungo sokujikeleza. Uma lokhu kwenzeka, ngakolunye uhlangothi loMhlaba ukunyakaza kokujikeleza kwenzeka okubangela amandla we-centrifugal. Lamandla Iyakwazi ukwenza amanzi akhuphuke abangele lokho esikubiza ngokuthi i-high tide. Ngokuphambene nalokho, ubuso beplanethi ebhekene nenyanga engathinteki ekudonseni kwamandla adonsela phansi buzoba namandla amancane.
Igagasi alihlali lifana njalo njengoba kunezici ezithile ezinquma amandla alo. Yize kwaziwa ukuthi imijikelezo ephakathi kwegagasi eliphansi neliphakeme ngamahora ayisithupha, empeleni akufani nhlobo nalokho. Umhlaba awakhiwe ngamanzi kuphela. Ukuthi kukhona amazwekazi, ama-geometri asogwini, amaphrofayili wokujula, iziphepho, imisinga yolwandle nemimoya ethinta amagagasi.
Amagagasi aphilayo neap
Njengoba sikwazile ukuveza, amagagasi ancike esimweni senyanga neLanga. Uma lokhu kuhambelana maqondana noMhlaba, amandla okukhanga adonsela phansi makhulu. Lokhu kuvamise ukwenzeka lapho sinenyanga egcwele noma entsha. Lesi simo senza ukuthi amagagasi abe phezulu futhi abizwe ngamagagasi entwasahlobo.
Ngakolunye uhlangothi, lapho inyanga, uMhlaba kanye nelanga kwakha i-engeli elifanele, amandla adonsela phansi ayancipha. Ngale ndlela yaziwa ngokuthi ama-neap tide. Lokhu kwenzeka ngezikhathi zokuncipha nokuncipha.
Ukucacisa yonke lemiqondo, sizoshiya ezinye izincazelo eziwusizo kakhulu:
I-high tide noma i-high tide: Lapho amanzi olwandle efinyelela ezingeni eliphezulu ngaphakathi komjikelezo wamaza.
I-tide ephansi noma i-tide low: Lapho izinga lamanzi lomjikelezo wamanzi lifinyelela ezingeni lawo eliphansi.
High tide isikhathi: Isimo lapho umsinga ophakeme noma umzuzu wokuphakama okukhulu kakhulu kwezinga lolwandle kwenzeka endaweni ethile.
Isikhathi samanzi aphansiIsikhathi lapho i-tide ephansi noma i-amplitude ephansi yolwandle kwenzeka ngesikhathi esithile.
Iyathulula: Yisikhathi esiphakathi kwegagasi eliphezulu namaza aphansi.
Ukukhula: Isikhathi esiphakathi kwamaza aphansi namaza aphakeme
Izinhlobo zamagagasi entwasahlobo
Kunokuhlukahluka okuningi okusebenza kumagagasi futhi, ngakho-ke, kunezinhlobo eziningana.
Ziyaziwa ngokuthi ama-syzygies. Yimisinga ejwayelekile yasentwasahlobo, okungukuthi, leyo eyenzeka nini umhlaba, inyanga nelanga kuhambelana. Kungaleso sikhathi lapho amandla akhangayo esezingeni eliphezulu. Lokhu kwenzeka ngezikhathi zenyanga egcwele nenyanga entsha.
Amagagasi entwasahlobo alinganayo
Lapho la magagasi entwasahlobo enzeka, kufakwa into eyodwa yokulungisa isimo. Lokhu kwenzeka lapho izinkanyezi ziqondanisa ngezinsuku eziseduze kwama-equinox entwasahlobo noma ekwindla. Kwenzeka lapho iLanga lisendizeni ye-equator yoMhlaba ngokuphelele. Kulokhu ama-tide entwasahlobo aqinile impela.
Amagagasi entwasahlobo e-equinoctial perigee
Lolu hlobo lwamagagasi entwasahlobo lwenzeka lapho konke okungenhla kwenzeka futhi, ngaphezu kwalokho, inyanga isesigabeni sayo se-perigee. Lokhu kulapho umoya ophakeme uphakeme kunanini ngaphambili ngenxa yokusondelana kwenyanga noMhlaba. Futhi, ukuqondaniswa nenyanga, uMhlaba neLanga kunamandla amakhulu adonsela phansi. Lapho kwenzeka la magagasi entwasahlobo, amabhishi athinteke kakhulu ancishiswa ngaphezu kwengxenye.
Kungani engekho amagagasi oLwandle iMedithera?
Okuthile ozokwazi vele ukuthi amagagasi oLwandle iMedithera ayigugu. Lokhu kwenzeka njengoba kungolwandle olucishe luvaleke ngokuphelele.. Ukungena kwayo kuphela "okusha" kwamanzi kungenxa yeStrait of Gibraltar. Njengoba lendawo yamanzi incane kakhulu, ayikwazi ukumunca inani elikhulu lamalitha amanzi oLwandle i-Atlantic. Ngakho-ke, lo mthamo omkhulu wamanzi ugcinwe enkanjini. Leli qiniso lenza iStrait sisebenze njengompompi ovaliwe. Ngaphezu kwalokho, kwakha okunamandla okungena manje kepha akukwazi ukufinyelela eMedithera.
Kungashiwo ukuthi asikho isikhathi esanele sokuba iMedithera ibe namagagasi. Kungabonakaliswa okuncane ezinkathini ezikhethwe kakhulu, kepha akuwona amagagasi anamandla. Ngesikhathi sokukhishwa, kwenzeka okuphambene naseStrait kuphuma ukuphuma ngamandla okuya e-Atlantic.
Kumele futhi kushiwo ukuthi njengoba ulwandle oluncane, ukuheha kwenyanga kuncane. Kunamaphuzu amaningi nasogwini futhi kufinyelela kumasentimitha kuphela.
Ngo-2016 u-Alfonso Cuenca wabikezela intwasahlobo enemvula encane kunokujwayelekile. Ngaphezu kwalokho, uthe ukuwa nobusika nakho kuzoma kakhulu. Phakathi no-2017, imvula yayizoba yindlala, ngaphandle kwePhasika nezindawo ezisizungezile.
Kulesi sibikezelo, uchwepheshe wethu u-cabañuelista wayengenaphutha kusukela ngo-2016 nango-2017 kube yiminyaka eyome kakhulu emlandweni.
Ngiyethemba ungaqonda kangcono ukuthi kusho ukuthini ukusakazwa kwamagagasi entwasahlobo nokuthi yiziphi izinhlobo ezikhona. Manje kufanele uwahlaziye ukuze usebenzise lokho okufundile.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ciencia » Amagagasi entwasahlobo